जलवायुको चरित्रमा आएको फेरबदलको असर खेतबारीसम्मै आइपुग्दा अधिकांश किसानको जीविकोपार्जनमा समस्या आइपरेको छ।
सौम्य शक्तिका सारथि
३० मुलुकमा मात्र कूटनीतिक उपस्थिति रहेको नेपाललाई अन्यत्र चिनाउने नै प्रवासमा रहेका नेपाली हुन्। जहाँ पुगे पनि विदेशमा नेपाललाई चिनाउन, नेपाली कला र संस्कृतिको छवि उजिल्याउन प्रवासी नेपाली सक्रियता देखिइहाल्छन्।
देउवाका सय दिन: अकर्मण्य र दिशाहीन
सुशासन र विकासमा अग्रसर हुने अपेक्षा गरिएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार विवाद, अकर्मण्यता र दिशाहीनतामा अलमलिएको छ।
कात्तिक लाग्दा पनि किन परिरहेको छ झमझम पानी? न्यून चापीय प्रणाली र पश्चिमी वायुको सक्रियताका कारण पोस्ट-मनसुन अवधिको शुरूमै ठूलो पानी परेको छ।
के मनसुनको प्रवृत्ति फेरिएको हो? मनसुनले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्दै जाँदा जनजीवनमा त्यसका घातक असर देखा पर्न थालेका छन्।
‘सर्वोत्तम सिमेन्ट’ को शेयर प्रकरणमा जे भयो... धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना, सदस्य चन्द्र ढकाल र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका सीईओ चन्द्रसिंह साउदले पदबाट हात धुनुपरेको समाचार रिपोर्टिङको पृष्ठभूमि र अन्तर्कथा।
चीनलाई कसरी चिन्ने? नेपाली अर्थ-राजनीतिमा बेइजिङको बढ्दो प्रभाव सन्तुलनमा राख्न चीनलाई ‘देवत्वकरण’ को सट्टा सम्मानजनक छिमेकीको स्थान दिनुपर्छ।
एमसीसी फिर्ता गए के हुन्छ? हातैमा आइपुगेको अनुदान फिर्ता पठाउँदा सम्झौता पालना नगर्ने मुलुकका रूपमा विश्वसनीयता खस्किने मात्र हैन, भविष्यको हाम्रो विद्युत् प्रणाली नै अप्ठ्यारोमा फस्छ।
मध्यम वर्गलाई भार पारी ‘व्यवसायी पोस्ने’ बजेटको कर विवादमा सरकारले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अघि सारेको कर नीतिले मध्यम वर्गलाई थप भार पार्नेछ भने यसको सोझो लाभ सीमित व्यवसायीको खल्तीमा पुग्नेछ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगाना निलम्बित, पदमुक्त गर्न पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन सरकारले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई पदबाट निलम्बन गरेको छ।
वार्षिक तीन खर्बको कृषि उपज आयातको अर्थ-राजनीति अर्कै महादेशको माटोमा उब्जिएका र अलग्गै हावापानीमा फलेका चिजबिज पानीजहाज र वायुयान मार्फत हजारौं माइलको यात्रा तय गरी नेपालीको भान्सामा आइपुग्नुको अर्थ-राजनीति कस्तो छ?
राजनीतिक स्वार्थले अल्झियो एमसीसी अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइन नेपालको विद्युत् प्रणालीको सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि अनुदान सम्झौता राजनीतिक भुमरीमा अड्किरहेको छ।
अर्थमन्त्रीको ‘हुकुमी’ शैली अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अभद्र शैली र निर्णयका कारण जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो महीनामै विवादमा घेरिन थालेका छन्।
सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयरमा यस्तो छ नियामक, पहुँचवाला र ठूला लगानीकर्ताको सम्बन्धको जालो सर्वसाधारणलाई महँगोमा शेयर बिक्रीको प्रस्ताव गरेको सर्वोत्तम सिमेन्टको संस्थापक शेयर धितोपत्र बजारसँग प्रत्यक्ष सम्बद्ध व्यक्तिलाई शुरूमै बाँडिनुले भविष्यमा शेयर बजारमा चलखेल गरी मूल्य–पासो सिर्जना गर्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंका उब्जाएको छ।
सर्वोत्तम सिमेन्टमा स्वार्थ बाझिने गरी नेप्सेका सीईओ साउदको पनि शेयर शेयर बजारको कारोबार गर्ने प्लेटफर्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चन्द्रसिंह साउदले सीधै स्वार्थ बाझिने गरी दोस्रो बजारमा आउने तयारीमा रहेको एक कम्पनीको शेयर खरीद गरेको फेला परेको छ।
शेयर रमेश कुमार
नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले आचारसंहिता र कानून विपरीत प्राथमिक निष्कासन हुन लागेको एक कम्पनीको शेयर हात पारेको फेला परेको छ।
किन कोभिड-१९ बाट कर्णालीवासी नै बढी मरिरहेका छन्?
कोभिड–१९ बाट ज्यान गुमाउनेको दर देशको सुगम स्थानको तुलनामा दुर्गममा धेरै छ। यसले स्वास्थ्य सेवामा असमान पहुँच र खोपको असमान वितरणबारे प्रश्न उठाएको छ।
किसानको पूँजीमा पहुँच र उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएकोे सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा कार्यक्रमको फाइदा अर्बौं रुपैयाँका कारोबारीले उठाइरहेका छन्। जनताले तिरेको करबाट सरकारले ब्याज अनुदानका नाममा कसरी ठूला व्यवसायी पोस्दै छ भन्ने खुलासा।
किन आइरहेको छैन नेपालमा पर्याप्त खोप? अहिलेसम्म कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अनुदान र खरीदको प्रगति हेर्दा नेपालले सबै नागरिकलाई खोप दिलाउन लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। यद्यपि, सरकारले एकाध महीनाभित्रैमा सबै नागरिकलाई खोप दिने बताउँदै आएको छ।
मासुले कसरी बदल्दै छ नेपालीको खानपान संस्कृति? बितेका दशकहरूमा नेपालीको खानपानको शैलीमा ठूलो परिवर्तन आएको छ, मासुको उत्पादन र उपभोगमा आएको विस्तार त्यसैको दृष्टान्त हो।
पञ्चायत सम्झाउने सरकारको ‘लाइसेन्स-राज’ : यसरी पोसिँदै छ आसेपासे सत्ता निकट व्यवसायीलाई मात्रै लाइसेन्स बाँड्ने अभ्यास मार्फत सरकारले आसेपासेलाई लाभ दोहन गर्ने अवसर सिर्जना गरिरहेको छ।
निजी क्षेत्रले किन गर्दै छ सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग? निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको सम्पत्ति अभिलेखीकरणको कार्यक्रमले भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचबिखन, वन्यजन्तुको ओसारपसार जस्ता अवैध तरिकाले कमाएको धनसम्पत्तिलाई निर्मलीकरण गर्ने ढोका खोलिदिन्छ।
किन सार्वजनिक हुँदैन मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण? आर्थिक पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने असल अभ्यासलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तोडिरहेको छ।
के हो रघुवीर महासेठको शक्तिको स्रोत? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘दाहिना’ भएकै कारण रघुवीर महासेठ परिवार २०७४ सालयता निरन्तर शक्तिमा छ। तर, उनी कसरी ओलीका यतिविघ्न प्रिय बन्न पुगे? उनको शक्तिको स्रोत के हो?
कहिले अन्त्य होला अर्थतन्त्रमा महामारीको संक्रमण? कोरोनाभाइरसले सिर्जना गरेको अनिश्चयले देशको अर्थतन्त्रको विस्तारलाई एकाध वर्षसम्मै खलबल्याउने जोखिम छ। त्यसमा पनि खोपमा पहुँच बढेर महाव्याधिबाट छुटकारा नपाउन्जेल अर्थतन्त्रले पुनर्लय समात्न सक्नेछैन।
चुहानडाँडा विमानस्थल : यतीका ‘आङछिरिङ शेर्पा’ को नाममा किन? बजेटमार्फत तेह्रथुमको चुहानडाँडामा बन्ने विमानस्थलको नाम ‘आङछिरिङ शेर्पा विमानस्थल’ बनाउने सरकारी घोषणा सर्वथा अनुचित छ।
चुनावी सरकारको लोकप्रियतामुखी बजेट, यी हुन् केही सकारात्मक प्रयत्‍न अघिल्ला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बनाएका पछिल्ला तीन वटा बजेटले पार्टीप्रति निम्त्याएको अवगाललाई विचार गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नयाँ बजेटमार्फत लोकरिझ्याइँको विकल्प समातेका छन्।
महामारीमा पनि रोकिएन सार्वजनिक नियुक्तिमा अराजकता क्षमता र योग्यता नहेरी व्यक्तिगत र राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा सार्वजनिक निकायमा पद बाँड्ने प्रवृत्ति थप मौलाउँदै गएको छ।